Akụkọ - abịakọrọ ikuku ụfụfụ ọkụ, nemesis nke ọkụ ọkụ
Akpa akpa abịakọrọ ikuku ụfụfụ ọkụ na-agbanyụ ọkụ ngwaọrụ
Site na ọganihu ngwa ngwa nke usoro mmezi ihe, ọnọdụ ọkụ na-esiwanye ike. Karịsịa, ụlọ ọrụ petrochemical na-ezute ọtụtụ ihe mberede na usoro mmepụta kwa ụbọchị. Ozugbo ihe ọghọm kemịkal dị egwu, ọ na-agbasa na mberede, na-agbasa ngwa ngwa yana ọtụtụ nsogbu. , Enwere ọtụtụ ụzọ nke mmerụ ahụ, nchọpụta adịghị mfe, nnapụta siri ike, na emetọ gburugburu ebe obibi. Na nzaghachi maka nsogbu mberede dịka gburugburu gas na-egbu egbu ma na-emerụ ahụ, nnapụta na obere oghere, ọgụ ọkụ ọkụ nke ụdị ọkụ dị iche iche, na mmetọ nke mmetọ kemịkal, akụrụngwa ndị mmadụ na-arụkarị ọrụ dị mkpa.
Mmepe nke ọkụ na-ehichapụ ọkụ n'otu ụlọ na-ala azụ ma na-ejedebe na usoro ụfụfụ na-adịghị mma. Ejirila nwayọọ nwayọọ wepụ ụkpụrụ ụfụfụ a n'ihi nsị na-enweghị afọ ojuju. Positivekpụrụ nkwupụta ụfụfụ dị mma na-adabere na caf (usoro ikuku ikuku ikuku) na-aghọwanye ewu ewu n'ọhịa ọkụ ọkụ na ikpochapụ ọkụ.
1. Njikọ aka nke ikuku oku na ụfụfụ ọkụ emenyụ ọrụ iji chebe nchekwa onwe onye
Igwe paịpụ ikuku na-eku ume na ihe ọkụ na-agbanyụ ọkụ na-eji akọ agwakọta akụrụngwa ikuku na-eku ume. Mgbe a na-eji ya, ihe nkpuchi iku ume na-egbochi gas na-egbu egbu nke na-eme n'oge ọkụ na mmetọ kemịkal na-emerụ ahụ mmadụ. Ihe nkpuchi na-anabata windo anya na windo buru ibu. Anya ọhụụ, site na njikwa nke nduzi nke ikuku ikuku inhalation, na-eme ka oghere ahụ doo anya ma na-enwu gbaa mgbe niile na-eji ihe nkpuchi ihu zuru oke, na-echekwa ihu ma ghara igbochi ahịrị anya.
Positivekpụrụ nkwupụta ụfụfụ dị elu nke dị elu nke ngwaọrụ a na-eme ka ụfụfụ na-agba ụfụfụ ma na-amụba elu. Mgbe ndị mmadụ nọ n'ọkụ ahụ gbara ya ọkụ, a ga-enwe akwa nchekwa iji chebe ha pụọ ​​na mmerụ ọkụ ma chebe ndị ọrụ ahụ nke ọma ma chọọ ma zọpụta ihe.
2. The knapsack imewe bụ adaba na-ebu
Igwe iku ume ikuku na ikuku na-eku ume ọkụ na-ewepụta knapsack imewe ma dịkwa mfe ibu. Ngwaọrụ ahụ dị nkenke, na-aga ngwa ngwa na azụ, na-enweghị aka, na-enye aka ịrịgo na nnapụta, ma nwee ike igbo mkpa nke ndị ọrụ iji rụọ ọrụ ọkụ ọkụ na nsị na mberede na warara warara na oghere. Ihe eji arụ ọrụ a na - eme ka mpb18 wee dị mma maka mbara ala na ngwa dị iche iche. Oke obosara.
3. Ọkụ na-agbanyụ ọkụ dị elu
Ugboro abụọ ikuku na-eku ume na ụfụfụ ọkụ na-ere ọkụ nwere akara ọkụ nke 4a na 144b, nke karịrị ike ọkụ ọkụ nke ọkụ na-agbanyụ ọkụ ọtụtụ ugboro. Ngwaọrụ a nwere ike imenyụ ire ọkụ mmanụ dị lita 144 maka ọkụ mmanụ ụgbọala siri ike.
4. Ogologo ogologo ịgba
Ebe ọ bụ na ọkụ ọkụ nke ọkụ ọkụ na-eme ka o sie ike ịbịaru ndị mmadụ nso, ọ na-esiri ndị na-agbanyụ ọkụ nkịtị ike ịrụ ọrụ ha kpamkpam. Ogologo oge ịgba ọkụ nke ikuku na-ekuku ume na ụfụfụ ọkụ bụ mita 10, nke bụ okpukpu atọ nke akụrụngwa ọkụ na-enwu ọkụ na 5 ugboro nke gas na-emenyụ ọkụ Times. Ọ dị mma maka ndị ọrụ iji wepụ ọkụ n'ebe dị anya site na ọkụ ọkụ, ọnọdụ ọnọdụ uche ha na-adịwanye jụụ, nke na-eme ka mmetụta ọgụ ọkụ ahụ ka mma.
5. Ugboro ugboro juputara na ojiji na saịtị
Igwe iku ume ikuku na ụfụfụ ọkụ anaghị arụ ọrụ, n'ihi ya enwere ike jupụta ya n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Ihe nke gbọmgbọm ahụ na-egbochi mmebi ma nwee ike jupụta na mmiri ọhụrụ, mmiri mmiri, wdg. Mgbe ị fesara bọket nke ọkụ na-agbanyụ mmiri ọkụ na saịtị ahụ, were mmiri dị nso ma jikọta ya na mmiri mbụ ụfụfụ. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ ọzọ na - enweghị ike ịmalite, na ikike imenyụ ọkụ okpukpu abụọ.
6. Ontology nchekwa atọ oyi akwa nkwa
Ngwakọta nchebe mbụ: ikuku na-eku ume ma na-ekpo ọkụ ụfụfụ ọkụ na-eji ọkọlọtọ gas-ọnya mejupụtara gas. Ndị na-arụ ọrụ gas nwere njirimara nke ịdị arọ ọkụ, nrụgide dị elu na arụmọrụ dị elu. Nke a bụ ugbu a nnukwu nchekwa gas gas.
Ihe nchebe nke abụọ: a na-eji ihe nrụpụta ngwaọrụ ahụ nwee valvụ nchekwa iji kpuchido nrụpụta nrụpụta nke nrụgide nrụgide site na ibubiga ókè. Mgbe nrụpụta nrụpụta karịa 0.9mpa, valvụ nchekwa ga-emepe na-akpaghị aka iji belata nrụgide iji kpuchido onye ọrụ site na nrụgide dị elu.
Ihe nchebe nke atọ: a na-eyi nrụgide nrụgide na obi nke onye na-arụ ọrụ, a na-etinyekwa ngwaọrụ mkpuchi dị ala. Mgbe nrụgide nke gas cylinder dị ala karịa 5.5mpa, mkpu ahụ ga-ada ụda dị egwu iji chetara onye ọrụ na nrụgide nke gas cylinder ezughị ezu ma wepụ ọnọdụ ahụ n'oge.
7. Dị ọcha na environmentally friendly
Uzuzu nke ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-emetọ gburugburu ebe obibi ma na-akpasu akụkụ iku ume mmadụ. Ọ nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ejiri ya na gburugburu ebe ikuku na-ekesa ikuku. Igwe paịpụ ikuku na-eku ume na ọkụ ụfụfụ na-emenyụ ngwaọrụ ebumnuche abụọ na-eji ndị ọrụ ụfụfụ na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi. Foamfụfụ a na-agba agba anaghị enwe mgbakasị na akụkụ iku ume mmadụ na akpụkpọ ahụ. Thefụfụ ahụ ga-emebi n’ime awa ole na ole, ọ gaghịkwa emetọ gburugburu ebe obibi. Ọ dị mfe ihicha na saịtị mgbe ojiji. Emejuputara atumatu oru mmepe gburugburu ebe obibi.
8. Uru mmetọ
Igwe paịpụ ikuku na-eku ume na ụfụfụ ọkụ na-agbanyụ ngwaọrụ abụọ nwere uru pụtara ìhè na nhichapụ n'ihi njirimara nke ya. Gbọmbụ ahụ na-egbochi imebi emebi ma nwee ike jupụta na ngwọta mkpokọta kwekọrọ na ụdị nsị; ihe mkpuchi ahụ na-ewepụ ma dị mfe iji dochie ya. Ma o nwere njiri mara nke ọma atomization mmetụta, n'ikuku ana enweta n'otutu-directional nrutu nke alụlụ eruba, nnukwu mkpuchi ebe siri ike adhesion. Site na ikuku oku ikuku ya, o nwere ike igbochi ndi mmadu, ugbo ala, akụrụngwa na akụrụngwa, isi mmalite, wdg, na-ewepụ isi mmalite nke oria ma gbochie mgbasa nke mmetọ.
9. Uru dị n’ibibi na igbochi ọgbaghara
Gbakwunye ndị na-akpasu iwe iwe na ngwaọrụ a na-aghọ ngwa ọgụ mgbochi ọgbaghara. Ebe dị egwu nke mita 10 na nnukwu ikike nke 17l hụ na ikike mgbochi ọgba aghara nke ngwaahịa a siri ike.
A na-eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ebe na ọkụ ọkụ, kemịkalụ, mbupu, mmanụ, Ngwuputa na ngalaba ndị ọzọ, maka ndị na-ere ọkụ ma ọ bụ ndị nnapụta ka ha wee rụọ ọrụ ọkụ ọkụ, nnapụta, enyemaka ọdachi na nnapụta na gburugburu ebe dị iche iche na anwụrụ ọkụ, gas na-egbu egbu, uzuoku ma ọ bụ erughị oxygen. Ọrụ enyemaka.